ဧရာဝတီတိုင်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ၁၄ ဦးကို ထောင်...
7 ธ.ค. 2562 - 19:58 น.
ဧရာဝတီတိုင်း ရွှေသောင်ယံမြို့ဘောမိကျေးရွာ အုပ်စုမှာ နိုဝင်ဘာလတုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်၂၂ ဦးထဲက ၁၄ ဦးကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေနဲ့ ပုသိမ်မြို့နယ် တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၆ရက်မှာ အလုပ်နဲ့ထောင်ဒဏ် အသီးသီး ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို တွေ့ရှိခဲ့သူတွေထဲက အသက်ပြည့်ပြီးသူ ၁၄ ဦးကို အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချလိုက်တာလို့ ဧရာဝတီတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သိရပါတယ်။
အခုပြစ်ဒဏ်ချခံရသူတွေဟာ ရခိုင်ကနေ ထွက်လာသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ၁၉၄၉ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၃ နဲ့ အရေးယူခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ အသက် မပြည့်သေးသူတွေကိုတော့ လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကို ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သိရပါတယ်။
အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ယောက်ျားလေး၂ဦးနဲ့ မိန်းကလေး ၆ ဦး ကို လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းနဲ့ အမျိုးသမီး သင်တန်းကျောင်းတွေကို အသီးသီး ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
"ငရုတ်ကောင်းဘက်မှာ အယောက် ၃၀ ရယ်၊ ရွှေသောင်ယံမှာ ၂၂ ယောက်ရယ်၊ ချောင်းသာမှာ ၉၆ ယောက်ရယ် ၂၀၁၉ ထဲမှာ။ ၂၂ ယောက်ထဲကပဲ ပြစ်ဒဏ် ချရသေးတယ်။ သူတို့က နယ်မြေကျော်ပြီးတော့ စည်းကမ်းဖောက်ပြီးတော့ လဝက ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့လာတာ" လို့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ဒုတိယ ရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေက ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။
"နှစ်ပြည့်သွားရင်တော့ အများအားဖြင့်တော့ သူနေရပ်ကို ပြန်ပို့မှာပေါ့"
"အခုလို ရခိုင်ကနေထွက်လာပြီး ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမှာတွေ့လို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားရသူအရေ အတွက်ဟာ ၃လအတွင်း လူ၁၅၀ ကျော်အထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်" လို့ ဒုတိယ ရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေက မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့ အနာဂတ်အတွက် စခန်းကနေ ထွက်ဖို့ကြိုးစားကြတာဖြစ်တယ်လို့ စစ်တွေမြို့ သက္ကယ်ပြင် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ နေထိုင်တာ ၇ နှစ် နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုအေးမောင်က ပြောပါတယ်။
"ဒီထဲမှာ အကျဉ်းသားလိုလို နေရတာ။ ဒါ ခုနစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ ဘာတစ်ခုမှ မထူးဘူးဆိုတော့ ဒီလူတွေက အကျဉ်းစခန်းထဲမှာ ဆက်ပြီး နေလို့ရှိရင် အနာဂတ်မဲ့နေတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ပညာရေး၊ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်က ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူးလေ ဒီမှာ"
"လူ့အခွင့်အရေးဆိုလို့ နာမည်ပဲ ကြားတာပဲနော်။ လမ်းမှာ ဖမ်းလို့ရှိရင် သူတို့ထောင်ကျမှာ အဲဒါကိုလည်း သိတယ်။ သိသော်လည်း တကယ်လို့များ သူတို့ အဖမ်းမခံရဘဲ လွတ်သွားလို့ှရှိရင် သူတို့ဘဝက အောင်မြင်မှု တစ်ခုရမှာပေါ့။ အဲဒါကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ သွားတာပါ" လို့ ကိုအေးမောင်က အဲဒီစခန်းတွေက လူတွေရဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်း စစ်တွေမြို့ နာဇီရပ်ကွက်က ရိုဟင်ဂျာ ၁၀၀ ကျော်ဟာ လှေနဲ့ ထွက်လာပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တန်းမြို့နယ်ကို ရောက်လာတဲ့အတွက် သူတို့ကို တပ်မတော်ရေယာဉ်နဲ့ ရခိုင်ကို ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ကနေ ဧရာဝတီတိုင်းကို ရေလမ်းကြောင်းကတဆင့် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ဧရာဝတီ တိုင်းကတဆင့် ရန်ကုန်နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကို သွားဖို့ ရည်ရွယ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည်တချို့က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ၁၄ ဦးကို ထောင် ၂ နှစ်စီချ